Maitiro ekusarudza nzira dzekubhadhara dzechitoro chepamhepo | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | Analytics, CRM uye Big Data, eCommerce, Nzira dzokubhadhara
Maitiro ekubhadhara ndeimwe yezvinhu zvinofanirwa kutariswa mukutungamira uye manejimendi yechitoro chepamhepo, chero chimiro uye mavambo. Nekuti pakati pezvimwe zvikonzero ndiyo nzira yekuchinjisa kubhadharwa kwekutengesa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvemakambani edhijitari. Zvauinazvo wedzera mumafomati zvakanyanya sezvinobvira kugadzirisa kune zvinodiwa nevatengi kana vashandisi.
Mupfungwa iyi, nzira dzekubhadhara chishandiso chakakosha chinoshandiswa kuita manejimendi ekutengeserana. Uye izvo saka zvinofanirwa kusarudzwa inonyanya kukodzera kuitira kuti vatengi vakwanise kutenga izvi online. Pakati pemaitiro akasiyana siyana atinozoongorora pazasi kuitira kuti uve nepfungwa dzaunofanira kushandisa kubva zvino zvichienda mberi.
Kubva pane ino maonero ekuona, zvinofanirwa kusimbiswa kuti dzimwe nzira dzekubhadhara dzinoramba dzichichinja uye kukwikwidzana kwekutonga kwehurongwa hwakatarisana nemabhangi, kunyorera, vanoshandisa nhare, vagadziri venhare, nezvimwe. Kwete pasina, iwe unogona kuwana kubva panzira dzekubhadhara zvakajairika kana zvechinyakare kune inonyanya kugadzirwa uye iri kubuda mumakore apfuura.
1 Maitiro ekubhadhara: ndeipi yekusarudza?
2 Virtual kubhengi POS
4 Kubhadhara nescrow
5 Kubhadhara nema bitcoins
6 Kuendeswa kubhengi
Maitiro ekubhadhara: ndeipi yekusarudza?
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzakanakira kuchitoro changu chepamhepo kana kutengesa? Mhinduro haina kufanana uye neimwe nzira zvinoenderana nevazhinji kuti isu tichaedza kutsanangura zvinotevera. Ehe, pane zvakawanda zvinhu uye zvemhando dzakasiyana, uye pakati pezvakanyanya kunaka pane zvinotevera:
Chiratidzo, mune pfungwa yekuti zviri kunyanya kana zvishoma kuzivikanwa pakati pevashandisi kana vatengi.
Ziva iko iko kumuzinda wechitoro chepamhepo kuri sezvo ichachinja neimwe nzira kana nzira dzekubhadhara dzaunofanirwa kushandisa mune yako yemagetsi commerce.
Mutengo wechigadzirwa kana sevhisi inopihwa nekambani yako kubva zvino zvichienda mberi uye nekwaunobhadharwa hurongwa hwekubhadhara izvozvi.
Nezvinhu zvitatu izvi zvichave zvinokwana kuti iwe usarudze nzira dzekubhadhara dzechitoro chepamhepo. Mupfungwa yekuti kutenga uye kusvika kumagumo kwechitoro maitiro, kana vakasawana nzira yekubhadhara yavanonzwa kugadzikana nayo. Uye kubva pane ino maonero isu tichaenda kukupa iwe zvimwe zvinonyanya kukosha.
Virtual kubhengi POS
Ichi chirongwa chiri kuburitswa kunze nemakambani mazhinji epamhepo nekuda kwemabhenefiti makuru aanounza kwavari mukuverenga kwavo. Iko, sekukosha kukuru, zvinongodiwa kubhadhara kuburikidza nekubatana kwakachengeteka pakati pebhangi nechitoro chepamhepo. Chitoro hachikwanise kana kupa data rekadhi rebhangi, kuchengetedzwa kweruzivo ibasa rebhangi. Kunyangwe ichokwadi kuti iri muripo wekuteedzera wakada kufanana neizvo zvinonzi zvepanyama zviteshi zvePOS zviri muchokwadi, hazvisi izvo zviri zvechokwadi kuti mune ino nyaya vakatengwa neInternet zvitoro.
Imwe yemipiro yake inonyanya kukosha ndeyekuti mamiriro acho anosiyana pakati pemabhangi emabhizimusi nemari pakati pemakomisheni, kunyoreswa, mubhadharo, mabhonasi, miganho yekubhadhara, nezvimwe. Ehezve, ichi ndicho chimwe chezvinhu izvo zvichafanirwa kutarisirwa kuratidza kana zvakafanira kuti uzviise kune rako rehunyanzvi chiitiko. Zvichienderana nehunhu hwebhizinesi rako uye makwara aunoda kuisa pairi. Izvo hazvina kufanana, kune chiitiko chakabatana nezvipfeko zvemitambo pane kutengeswa kwezvigadzirwa zvetekinoroji. Hazvishamisi kuti, zvinoda kurapwa kwakasiyana zvakasiyana kana zvasvika panzira dzekubhadhara.
Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti chaiyo POS (Point of Sale Terminal) ibasa rinopihwa nemabhangi kuti vakwanise kuita / kugamuchira kubhadhara pamusoro peInternet. Icho chikuva chebhangi icho chiri pamusoro pekusimbisa ruzivo rwakapihwa uye kugadzirisa nzira yekuunganidza, kuburikidza nemaseva ayo.
Iyi ipuratifomu yekubhadhara iri nyore iyo inosanganisirwa mune imwechete peji yechitoro chepamhepo, kusiyana nePayPal. Iyi ficha inotungamira kune mashoma mashoma ekuvhara kutengesa, izvi zvakanaka. Imwe mukana ndeyekuti ine makomisheni akaderera pane PayPal, kunyanya anokosheswa pakutanga kwepurojekiti yepamhepo. Kune rimwe divi, inogona kugadzira kusavimbika mune mumwe mushandisi asingazive iwo Mutsara nechitoro chaicho.
Iine akateedzana hunhu hwatiri kuenda kukupa iwe pazasi kuratidza kubudirira kwekupinza kwayo mukutengesa kana online chitoro chefuma yako. Uye izvo chaizvo zvine zviitwa zvinotevera zvatiri kuzokuratidza pazasi:
Iko kubhadharisa kunenge kuri kushoma pane kweiyo dzimwe dzakaenzana nzira dzekubhadhara uye ndedzechizvarwa chazvino mumasisitimu anoshandiswa.
Iyo inoshanda kwazvo kune zvitoro zvepamhepo zvine huwandu hwakakwira hwebhizinesi uye rakanyanya mutengi mutengi kana mushandisi portfolio.
Kuchengetedza ndechimwe chezvinhu zvacho zvakakosha sezvo uchizochengetedzwa kubva kumabasa anoitwa neiyi nzira yekubhadhara.
Iyo yekunyorera modhi iyo inozivikanwa nekuve ichangoburwa kugadzirwa uye kubva kwaunogona saka kubatsirwa kubva ikozvino zvichienda mberi.
Inowanikwa mukuti mutengi haabhadhare mutengesi zvakananga, asi anosiya mari muakaundi yechitatu bato pane dhipoziti. Mari haina kuendeswa kubva kuaccount kuenda kumutengesi kusvikira mutengi agamuchira chigadzirwa uye otarisa kuti zvese zviri mugwara. Ndiyo nzira yakachengeteka yekubhadhara iripo nhasi, nekuti chero mukana wekubiridzira unodzivirirwa.
Paunenge uri kune imwe, iwe unogona zvakare kuita mashandiro zvisinei nehuwandu hwekushambadzira kwako sezvo pakupera kwezuva zviri zvekupa mhinduro inoshanda kune zvaunoda mune izvi zvatiri kutaura nezvazvo muchinyorwa chino. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi yekutarisa iyo ichave iri yemamwe madudziro.
Chero zvazvingaitika, iyi sarudzo yakasarudzika, asi haina kana bhenefiti kune vashandisi veiyi nzira yekubhadhara. Pakati payo zvinoratidzira chokwadi chekuchengeteka kwayo kukuru pamusoro pedzimwe pfungwa dzekushandisa. Kubva pane ino maonero, zvinogona kutaurwa kuti kubhadhara nescrow kunopa chivimbo kune ese mapato ari chikamu cheichi chiito chekushambadzira.
Kubhadhara nema bitcoins
Aya ndiwo maratidziro azvino muhurongwa hwekubhadhara paInternet uye zvakare inopa kusiyanisa kwakawanda mune chaiko mari. Kubva pamabitcoins kusvika pakubvongodza uye kuenderera uine rakakura runyorwa rwunoenderana nezvinodiwa zveaya mabhizimusi epamhepo. Kubatsira kwayo kukuru inyaya yekuti ihurongwa hunoshandiswa zvakanyanya nevechidiki zvikamu zvevanhu.
Tichiri kune rimwe divi, isu tinofanirwa zvakare kusimbisa chokwadi chekuti idzi mari dzemhando yepamusoro dzinoshandiswa nehukuru hwekutenga nekutengesa paInternet. Kushandiswa kwaro hakuna kunyanya kupararira asi kune vateveri varo. Kuvatambira muchitoro kunogona kukwezva vanhu vane mari mune yemagetsi mari. Inogona kubatsira zvakanyanya muinternet chiitiko chehunyanzvi, kunyanya remangwana rinounza kune vatengi kana vashandisi.
Uye mushure mechirongwa senge chitsva sezvazviri shanduko, hapana chinhu chiri nani pane kusarudza imwe yakajairika kana yechinyakare modhi senge kubhangi kuchinjisa. Iko, kunyangwe zvese, ichiri kushandiswa senzira yekutsinhana kwemari mukutenga zvigadzirwa, masevhisi uye zvinyorwa zvemagetsi zvemagetsi. Kusvika padanho rekuti vanouya kuzokanganisa mwero wekubhadhara unotarisirwa uye nhoroondo yezvinhu izvi zvekutengeserana zvine chekuita nebhangi.
Hazvishamise kuti, iyi nzira ichiri kushandiswa muecommerce mukutengeserana nemari yakakura. Izvo zviri nyore kushandisa uye zvakare haina makomisheni, kunyange iine zvimwe zvinhu zvekutarisa: iko kutengana kunoitika kunze kwepeji saka hazvigoneke kuita kuyerwa. Nepo kune rimwe divi, iri fomati inogona kutariswa panguva ino seisiriyo uye nekudaro inofanira kuongororwa kwazvo panguva panguva yekugadzira oparesheni kuti iite kudzora kwakasimba pamaakaundi ebhizinesi.
Ndokureva, uye nenzira yekupfupisa, angangoita mamiriro acho anova akasununguka uye kubhadhara kwacho hakuite mabhureki panguva yekupedzisa maitiro ekutenga. Mune izvo zvakagadziriswa seimwe yemakakatanwa makuru maererano nehurongwa hwekubhadhara. Nechengetedzo mumabasa ayo anoshamisa kwazvo kubva kune ese maonero maonero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Maitiro ekusarudza nzira dzekubhadhara dzechitoro chepamhepo
c inogona kubhadhara mari x muenzaniso wester junior, inoshanda